UkuFunda kuyimfuneko | Isiseko soMvuzo - Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Ukufunda kubalulekileyo
Ukuqonda ukuqonda kuyona nto ebalulekileyo ekuqondeni ukuba kutheni i-intanethi ye-intanethi ingabangela ingxaki kwimpilo yengqondo nangokwenyama. Kule candelo I-Foundation Reward iqwalasela ukufunda kwii-angles ezahlukeneyo.
Research ibonisa ukuba ukusetyenziswa koononophelo ngokuqhelekileyo kusetyenziswa 'ukuxhamla' ngokumalunga nabantu abaselula abanomlinganiselo ophezulu ukulibaziseka ukuphuhlisa. Oku kuthetha ukuba abasebenzisi bamanyala abakwazi ukubambezela ukoneliseka kwangoko kumvuzo oxabiseke ngakumbi kamva, njengokuphumelela kwiimviwo. Iikholeji neeyunivesithi zinika ingxelo ngamazinga aphezulu okuyeka abafundi e-UK nakwezinye iindawo.
Ziziphi ezinye iinkalo zokuhla kwehla? Ingcali yeengqondo uRoy Baumeister encwadini yakhe Ukunika amandla ithi ezona ngxaki zinkulu, ezomntu nezentlalo, zibangelwa kukusilela ukuzeyisa. Kwinto eyaba lelinye lawona maphepha akhankanyiweyo kuncwadi lwezesayensi yezentlalo, uBaumeister wafumanisa ukuba amandla ayasebenza njengesihlunu: inokuqiniswa ngokwenza kunye nokudinwa kukusetyenziswa gwenxa. Amandla anokunyuswa yiglucose, kwaye inokuqiniswa ngokuzalisa ivenkile yengqondo yepetroli. Yiyo loo nto ukutya nokulala-kwaye ngokungaphumeleliyo ukwenza enye yezo zinto-kuneempembelelo ezinkulu kuzibamba (kwaye kutheni ii-dieters zinobunzima bokumelana nesilingo).
Unjingalwazi waseYunivesithi yaseStanford uFilipu Zimbardo uchaza 'umlutha wokunyusa' kunye nokunciphisa imiphumo yezifundo kule ntetho, Ukuditywa kwamaGay?
Eli candelo linikeza izixhobo ngezihloko ezilandelayo:
• Imeko yesondo
• Imifanekiso engamanyala kunye neTyala leSondo kwangoko
• Ukuxhatshazwa kweInternet
Sinika kwakhona uluhlu lweeNkxaso ukuxhasa ukuqonda kwakho le micimbi.